Shiinaha oo jawaab kulul bixiyey Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka | Xaysimo
Home War Shiinaha oo jawaab kulul bixiyey Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka
Shiinaha oo jawaab kulul bixiyey Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka
Warbaahinta Qaranka Shiinaha ayaa si kulul uga jaawaab celisay hadalkii ka soo yeeray xoghayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka Mike Pompeo kaasi oo tibaaxayay in coronavirus uu ka soo unkamay mid ka mid ah sheybaarada Shiinaha. Wuxuuna shiinaha hadalkaasi ku tilmaamay mid waalli ah oo aan laga fiirsan.
Mike Pompeo ayaa Axaddii shalay ahayd sheegay in ay hayaan cadeeymo waaweyn oo muujinaya in coronavirus uu ka soo unkamay sheeybaar ku yaalla magaalada Wuhan oo ah halkii uu markii hore ka soo bilowday xanuunkan saf-marka ahi dabayaaqadii sannadkii tagay.
Seynisyahanno badan ayaa aaminsan in coronavirus uu ka soo unkamay xaywaanada duurjoogta ahi ee lagu kala iibsado seyladaha dalkaasi Shiinaha.
Tan iyo markii uu cudurkaasi ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore, ayaa coronavirus waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay ku dhawaad 3.6 milyan oo qof oo ku nool daafaha dunida halka in ka badan 249,000 oo qofna ay u dhinteen.